डा. प्रकाश पौड्याल जनरल फिजिसियन (नेपाल नेसनल अस्पताल) सामान्यतया चिसो मौसममा वातावरण प्रदूषण हुने र हावामा ब्याक्टेरीया रहने हुँदा अन्य समयको तुलनामा यो समयमा स्वास्थ्य जटिलता धेरै देखिन्छन् । वृद्धवृद्धा, बालबालिका र गर्भवती महिला बढी प्रभावित हुन्छन् । छातीको समस्या भएका व्यक्तिमा रोग बढेर जाने जोखिम रहन्छ�...
मधुमेह रोग धेरै फैलिँदै छ यसको कारण के होला? मधुमेह अचेल सर्वाधिक प्रचलित रोगहरूमध्ये एउटा हो। धेरै मान्छे यसलाई आधुनिक सभ्यताको अभिशाप भन्दछन्। अमेरिकामा यसलाई मृत्युको आठौँ र अन्धोपनको तेस्रो सबैभन्दा ठूलो कारण मान्दछन्। यतिमात्र होइन यसको संख्या भयावह ढङ्गले बढदै छ र यो बढने सबैभन्दा प्रमुख कारण रहन-सहनको हाम्रो बानीमा भएको फरक...
पिसाव नरोक्नुस्, हुन्छ यस्तो समस्या
विज्ञहरुका अनुसार पिसाबबाट शरीरका अनावश्यक तत्वहरु बाहिर निस्कने गर्छन्। चोहे त्यो कुनै प्राणी होस् वा मानिस पिसाब थैली भरिने बित्तिकै उनीहरुको स्नायुप्रणालीले त्यसको संकेत मष्तिष्कमा पुर्‍याउने बित्तिकै जो सुकैलाई पनि पिसाब फेर्न मन लाग्छ। तर कतिपय मानिसले आफूलाई पिसाब लागेको थाहा पाएर पनि रोक्ने गरेको पाइन्छ। पिसाबलाई धेरै...
- ओम धौभडेल विश्वमा आफ्नै माटो हावापानी अर्थात सभ्यता र संस्कृति अनुसार थुप्रै प्रकारका सम्बतहरु प्रचलनमा आएका छन् । मेसोपेटामियाको बेवोलोनियाबाट शुरु भएको सम्बतको इतिहासमा थुप्रै प्रकारका सम्बतहरुको जन्म भएको छ । यसै क्रममा नेपालमा विक्रम सम्बत, गुप्त सम्बत, शक सम्बत, लिच्छवि सम्बत्, अंशुवर्मा सम्बत, नेपाल सम्बत आदि । यस मध्ये नेपाल...
दशैं आश्विन शुक्ल पक्षमा प्रतिपदादेखि दशमी र त्यसपछि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म पनि मानिने विशेष पर्व वा उत्सव हो।दशैंलाई बडा दशैं, दशहरा, विजया दशमी, आयुध(पूजा आदि नामले जानिन्छ । यो खासगरी आश्विन शुक्ल सप्तमीका दिनदेखि दशमीका दिनसम्मका फूलपाती, महाअष्टमी, महानवमी र विजयादशमी लगातार चार दिनको महापर्व हो । यो नेपालीहरूको सबैभन्दा ठूलो...
२३ साउन, हेटौँडा । पछिल्लो समय हेटौँडामा डेंगुको विरामी फेला पर्ने क्रम बढेको छ । हेटौँडा अस्पतालसहित विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा डेंगुका विरामी बढेका छन् । डेंगुबारे कम जानकारी हुँदा यसको प्रभाव बढिरहेको छ । त्यसैले डेंगुबारे केही जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ । #के हो डेंगु ? विश्वमा लामखुट्टेको टोकाईबाट अति नै शीघ्र फैलने भाइरसको...
किन लगाईन्छ साउनमा हरियो चुरा र मेहेन्दी ?
साउन महिनालाई महिलाहरुले हरियो चुरा र मेहन्दी लगाउने एक प्रकारको उत्सवको रुपमा लिने गरेका छन् । साउन आउने वितिकै महिला तथा युवतीहरुले हातमा हरियो चुरा र मेहन्दी लगाउने एकखालको परम्परा नै बनिसकेको देखिन्छ । पहिला पहिला श्रीमान्को दिर्घायुको कामनाको लागी साउनमा महिलाले हरियो चुरा र मेहन्दी लगाउने चलन थियो भने आजकल हरियो चुरा र मेहन्दी...
स्नातक तह बीबीएस प्रथम वर्षको परीक्षाफल प्रकाशित(नतिजाको लिङ्क सहित)
१५बैशाख, हेटौँडा । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक तह अन्तर्गत बीबीएस प्रथम वर्षको परीक्षाफल प्रकाशित गरेको छ । त्रिवि पनिकाले २०७५ साउन–भदौमा संचालित ३ वर्षे बीबीएस प्रथम वर्षको नतिजा आइतबार प्रकाशित गरेको हो । बीबीएस प्रथम वर्षको परीक्षाफल हेर्न विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको नम्बरबाट म्यासेज बक्समा गई 3BBS लेखी एक स्पेस दिएर...
११ पुस, हेटौँडा । जाडो मौसममा निमोनियाँको संक्रमण बढी देखिन्छ । निमोनियाँ दिवस हरेक वर्ष १२ नोभेम्बरका दिन मनाइन्छ । निमोनियाँका बारेमा जनचेतना फैलाउन सन् २००९ देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो । यो वर्षको निमोनियाँ दिवसको नारा ‘स्टप निमोनियाँ’ थियो । – निमोनियाँ छातीमा हुने संक्रमण हो । पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरूमा...